कोरोनाभाइरसको नाममा सरकारलाई नै ठगी ! झुक्याएर साढे ४६ करोड लिएर मोजमस्ती – Naya Kura Daily
कोरोनाभाइरसको नाममा सरकारलाई नै ठगी ! झुक्याएर साढे ४६ करोड लिएर मोजमस्ती
July 28, 2020 264
काठमाडौं। कोरोनाभाइरसका कारण लाखौंले रोजगारी गुमाएका छन् । उनीहरुलाई दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि कठिन भएको छ । व्यवसाय ठप्प हुँदा खर्बौं नोक्सानी भएको छ । विश्वका सबैजसो देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लागेको छ । भाइरसले विश्वभरीका मानिसहरुलाई आर्थिक रुपमा संकटग्रस्त बनाएका बेला अमेरिकाको फ्लोरिडाका एक व्यक्तिले भने सरकारलाई नै करोडौं ठगेर मोजमस्ती गरेको खुलेको छ ।
न्यूयोर्क पोस्टको समाचार अनुसार ती व्यक्तिले झण्डै ४ मिलियन अमेरिकी डलर सरकारलाई ठगेर मोजमस्ती गरेको पाइएको छ । सोमबार अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार उनले यो रकम बिलासी लेम्बोर्गिनी कार, अन्य विलासिताका वस्तु तथा सेवा खरिदमा खर्च गरेको पाइएको छ । डेभिड टी हाइनेस नामका ती व्यक्तिलाई बैंक फ्रडको अभियोग लगाइएको छ । उनले वित्तिय संस्थाहरुमा गलत बयान दिएको र गैरकानुनी तरिकाबाट रकम निकालेर दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइएको छ ।
मियामीका २९ वर्षीय हाइनेसले कोरोनाभाइरस रिलिफ फण्डका विभिन्न सुविधा मध्ये सुरुमा पेमेन्ट प्रोटेक्सन प्रोग्राम अन्तर्गत विभिन्न कम्पनीको तर्फबाट कर्मचारीलाई तलब दिनको लागि रकम आवश्यक परेको भन्दै निवेदन दिएर १३.५ मिलियन डलर ठग्ने प्रयास गरेका थिए । ‘ती काल्पनिक कर्मचारीहरु या त अस्तित्वमै थिएनन् या उनीहरुले हाइनेसले दावी गरेको रकमको सानो अंश मात्र प्राप्त गरे’ हाइनेसविरुद्ध दर्ता गरिएको एफिडेभिटमा भनिएको छ ।
हाइनेसले विभिन्न शीर्षकमा गरी १३.५ मिलियन डलर ऋण माग गरेकोमा बैंकले ३ शीर्षकका ऋण स्वीकृत गरिदिएको थियो । जसको कूल राशी ३.९ मिलियन डलर थियो । पैसा हात पारेको केही दिनमै हाइनेसले २०२० लम्बोर्गिनी हराक्यान कार किने जसको बजार मूल्य ३ लाख १८ हजार डलर (३ करोड ८० लाख नेपाली रुपैयाँ) पर्छ । उनले हजारौं डलर डेटिङ वेबसाइट, गहना र कपडा किन्न तथा मियामी बीचका विलासी होटलमा बस्न पनि खर्च गरे ।
हाइनेसले किनेको बिलासी कारले जुलाइ ११ मा मानिसलाई हानेपछि घटनाको अनुसन्धान गर्ने क्रममा उनको ठगीको खुलासा भएको थियो । मियामी पुलिसले कारलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो जसलाई अब सील गर्ने तयारी भइरहेको छ । घटनापछि हाइनेसको खबता जाँच गर्दा उनको खातामा ३४ लाख ६३ हजार १६२ डलर थियो तर बैंकको ऋणको एक किस्ता पनि तिरेको रेकर्ड थिएन ।
शुक्रबार पक्राउ परेका हाइनेसलाई सोमबार पहिलो सुनुवाइपछि न्यायाधीश जोन ओसुलिभानको इजलासले १ लाख डलर धरौटीमा छाडिदिएको छ । उनी जिपिएस निगरानीमा आफ्नी आमाको घरमा बस्न पाउनेछन् । उनको अर्को सुनुवाइ अक्टोबर १४ का लागि तोकिएको छ ।
Prevकोरोनाका कारण नेपालमा थप एक जनाको गयो ज्यान
Next‘अब सिमानामा सेना पठाएर भारतलाई जवाफ दिनुपर्छ, जहाँ समस्या छ त्यहा छिट्टै सेना पठाउँ’ (भिडियो हेर्नुस्)
नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेहरुको संख्या ४१ पुगेको छ । महोत्तरी गाउँपालिका–३ मोरइका ६० वर्षीय एक पुरुषको पनि मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ४१ पुगेको हो ।
नाग मणिको दर्शन गरि ॐ लेखेर शेयर गर्नुहोस् धन लाभ हुने छ
साथीको विवाहमा जाँदा भएको त्यो घटना जसले तुलसी र टाइसनलाई पुर्यायो १३ वर्ष पछि जे’ल
भर्खरै जन्मिएको छोरालाई मार्न अमाजुले यस्तो खेल खेलीन् (3499)
डा. योगिता गौतमको विभत्स हत्या (3437)
दक्षिणकाली मन्दिरमा अप्रत्यासित घटना मन्दिरमा सबै नाग बाहिर निस्के अनिष्टको संकेत (3061)
बास्तविकता खुल्यो बिस्कुटको कार्टुनमा भेटिएको बच्चाको ? काठमाडौँमा झाडीभित्र कसले फाल्यो बच्चा(भिडियो) (2463)
विवाह गरेको ७ दिनमै विदेशिएका श्रीमानलाई दुवईमा मृत्युदण्डको फैसला, अझै पनि उनको आशमा १७ वर्ष देखि बसेकी छन् धनिषा (2303)
जव सडकमा मास्कको अण्डरवेयर मात्र लगाएर निस्किए पुरुषतस्विर सहित (2302)
कुमारी छोरीसँग बिहे गर्नेलाई साँढे ३ करोड इनाम दिने घोषणा ! (2112)
सिन्धुपाल्चोकमा बाढीले कोशीको एउटै माछा ६० केजी तौलसम्म बगाएर बगरमा ल्याएको छ (1750)
मानव बलि दिए कोरोनाको महामारीबाट मुक्त भईन्छ भन्ने सपनामा दर्शन पाएँ त्यसैले दिएँः पुजारी ओझा (1666)
लकडाउनबारे निश्चित खबर बाहिरियो।भोलीदेखी देशभर लकडाउन हुने निश्चित,पुरा पढ्नुहोस (1546)
दुखद खबर: बाटो माथिबाट खसेको पहिरोले डोजर पुरिँदा दुई बेपत्ता, चालक भाग्न खोजे पनि अँठ्याईहाल्यो पहिरोले
जनैको महत्व ? किन लगाउने जनै ?
भर्खरै ओली सरकारले लकडाउन खुल्ने मिति सार्वजनिक गरे?
उपत्यकामा खुकुलो बनाएर निषेधाज्ञा थप्ने तयारी, सवारी चलाउने-नचलाउने अलमल